कोरियामा सवारी दु’र्घट’नामा परि १ विदेशी नागरिकको मृ’त्यु, ४ घा’ईते ! - Thulo khabar
कोरियामा सवारी दु’र्घट’नामा परि १ विदेशी नागरिकको मृ’त्यु, ४ घा’ईते !
एजेन्सी : दक्षिणकोरियाको पश्चिमी बन्द’रगाह स्थित इन्छन शहरमा तीनवटा सवारी एकआपसमा ठाे’क्किएर दु’र्घट’ना हुदा एक बिदेशी नागरिककाे ज्या’न गएकाे छ।
‘दु’र्घट’नामा परी ज्या’न गु’माउनेमा ३० बर्षिया लिबियाली नागरिक रहेको प्र’हरीले जनाएकाे छ । साथै अन्य सवारी साधनमा रहेका ६ जना घा”इते भएका छन । दु’र्घट’ना दिउसाे १:४१ बजे भएकाे ड्युटीमा ख’टिएका प्र’हरी
अधिकारीले पु’ष्टि गरेका छन। विपरित दिशाबाट आइरहेकाे शेभ्रो’लेट केमेरो कारले विपरीत लेन बाट आउँदै गरेको किया मिनी कारलाइ ठ’क्कर दिदा दु’र्घट’ना भएकाे प्रत्यक्ष निगरानीमा बसिरहेका प्र’ह’री अधिकारीले बताए ।
प्र’ह’री अधिकारीका अनुसार लिबियाली नागरिककाे कारकाे पछाडिकाे पाङ्ग्राले कु’ल्चिएर ज्या’न गएकाे थियाे । दु’र्घ’टनामा अन्य दुई सवारी साधनमा रहेका ६ जना सबै घा’इते भएका र ती सबै दक्षिण कोरियाली नागरिक रहेकाे प्र’ह’रीले जनाएकाे छ।
घा’इते ६ जनाकाे नजिकैकाे अ’स्पतालमा उप’चार भैरहेकाे र सबैकाे अवस्था चि’न्ताज’नक रहेकाे बुझिएकाे छ।
सउलमा रहेकाे लिबियाली दूतावासलाई सूचना पठाइसकेको प्र’ह’रीले जनाएकाे छ। दु’र्घ’टनाको कारण पत्ता लगाउन प्र’ह’री अ’नुसन्धान गरिरहेकाे छ। -एजेन्सी